Mamatsy kobam-bolo 40mm mofomamy matevina modely vita amin'ny lay lay Gazebo samy hafa habe misy lay sy trano Green | Winsom
40mm Profil mavesatra matevina Modely matevina vita amin'ny takelaka Gazebo samy hafa samy hafa
30-49 Taratasy 50-99 Taratasy
$ 42.00 $ 40.00 $ 38,00
Laharana modely WS-F333
Anaran'ny entana 40mm Profil mavesatra matevina Modely matevina vita amin'ny takelaka Gazebo samy hafa samy hafa
Spigrafaly. Mombamomba ny tongotra --- 40x40 / 30x30mm hateviny 1.0mm, barika baràka --- 15x30mm
MOQ 30 isa
Mivoaha amin'ny masoandro fa tsy ao ny mahafinaritra! Ny tranolain-tsofina 10 x 10 miakatra canopy miaraka amin'ny takelaka rindrina dia fialofana fialamboly maivana izay milamina ao anatin'ny iray minitra. Ny tampon'ilay kanopy miady amin'ny UV dia manome fiarovana amin'ny alàlan'ny UV 99% amin'ny hazavana manimba ny masoandro. Izy io no fiarovana avo indrindra amin'ny fiarovana UV hita any ivelany! Ny loko canopy fotsy roa sosona dia manome antoka fa mijanona mangatsiaka ianao rehefa eo ambanin'ny lay. satria ny famolavolana tongotra mahitsy dia manome fitoniana fanampiny. Amin'ny toetr'andro orana, rano tsy misy rano ny tranoben'ny canopy mba tsy hahamando anao.
Ny tranolay dia manolotra fihenam-bidy mialoha sy fahatanterahany tonga any amin'izay ilanao azy. Ireo rindran-damina matanjaka sy feno io dia manana ny fantsom-bolo lehibe indrindra atolotray ary asongadin'ireo plastika adidy matevina ary lalantsara fanamafisana. Tsotra ny napetraka ary miforitra haingana amin'ny endrika mora entina ao anaty harona fenoina.
Adidy mavesatra sy taratasin'ny tongotra 40mm ambony, izay afaka manamafy ny lainao sy ny fiarovana bebe kokoa.
Ny baomba fanohanana rivotra dia miantoka ny fitoniana.
Previous: Trano Tunnel Greenhouse amidy 10′x7′x7 ′
Manaraka: Tranon-tsolosa ho an'ny Premium 10x15ft (3 × 4.5m)